Testimonials - ARYU Hospital
(+95)1- 9376 200
Obstetrician & Gynecology
Packages & Program
TELE CONSULTATION SERVICE
Obstetrician & Gynecology (OB & GYN)
I have had prolonged treatment here foraserious situation. the hospital, the consultants, staff, everyone has been highly professional and expertly trained. Staff are helpful, caring, professional and friendly. Thank you for everything. I highly recommend this global standard hospital in the heart of Yangon.
Ko Maung Maung Min Zin
ကျနော်က ဆားဗစ်ပိုင်းကလာတာဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ဆေးရုံဆို အဆင်မပြေတာများတယ်။
၁ ဆေးရုံက ကားပါကင် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ လုံခြုံရေးတွေလဲ အရမ်းယဥ်ကျေးပါတယ်။
ကိုယ်က ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေရင် အစ်ကိုဘာကူညီရမလဲ ဆိုပြီး လမ်းပြပေးတာကူညီပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးကြတယ်။ 5star hotel နဲ့ များမှားနေသလားထင်ရတယ်။
၃ အတွင်းပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု
ကျနော်လုံးဝမကြိုက်တာ ပိုးသတ်ဆေးနံ ပြင်းပြင်းပါ။အဲ့အနံ လုံးဝမရပါဘူး။အားလုံး သန့်ရှင်းပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်ရပါတယ်။
ကားရပ်တာနဲ့ အထုတ်အပိုးတွေ လှည်းနဲ့လာသည်ပေးပါတယ်။
ရေပူရေအေး အဲ့ကွန်း တီဗွီ ရေခဲသေတ္တာ အားလုံး အဆင်ပြေပြေရှိပါတယ်။
ကျနော့အမျိုးသမီးမွေးဖွားတာ အိုဂျီက ဆရာမကြီး ဒေါ်ဥမ္မာပါ။အရမ်းလဲ စိတ်ရှည်ပြီး ဂရုအရမ်းစိုက်ပါတယ်။
မေ့ဆေးဆရာမကြီးကလဲ မခွဲခင်ကတည်းက သေချာလေး အားပေးစကားပြောပေးပါတယ်။ကလေးဆရာဝန်လဲ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ဆရာဝန် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ဆို သေချာအချိန်ပေးပြီး နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။အရှေ့ကလေးတုန်းက ဆုံးထားဖူးတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး depression ရနေပါတယ်။ဒီအခြေနေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ဆရာဝန်တွေရော သူနာပြုတွေရော အရမ်းစိတ်ရှည်ပြီး စေတနာအရမ်းပါတာကိုခံစားမိပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒီဆေးရုံကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပေးတာနဲ့ ထိုက်တန်တာထက်ပိုတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကို ခံစားရပါတယ်။
ဆရာမကြီး ဒေါ်ဥမ္မာနှင့်တစ်ကွ Team တစ်ခုလုံး သူနာပြုအားလုံး အာယုမှ အထက်ပိုင်းဝန်ထမ်းများမှ သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းများအထိ အားလုံး ကျေးဇူးအထူတင်ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အာယုဆေးရုံကိုတက်ဖြစ်အောင် အကြံဥာဏ်ပေးပါသော သူငယ်ချင်း မငုဝါကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
အားယုဆေးရုံလဲ ယခုဝန်ဆောင်မှုအရည်သွေးကိုထိန်းပြီး ပိုအောင်မြင်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီး ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးဘုန်းမြင့်နှင့် တွဲဖက်ဆရာဝန်များ၊ မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီးများခွဲစိတ်ခန်းမှ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အခန်း၆၁၂အာယုဆေးရုံ ၆ လွှာမှ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုဆရာမများ အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နေ့စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုပေးပါသော ဆရာကြီးဦးဘုန်းမြင့်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးပါ။ အခန်း ၆၁၂ နှင့် ပတ်သက်သမျှကို ရင်ထဲအမှတ်တရရှိနေမြဲပါ။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများလည်း အထူးဖော်ရွေတာဝန်ကျေကြပါတယ်
ဆရာဝန်များနှင့်တကွ ဆေးရုံမှဝန်ထမ်းများအားလုံး ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဂရုစိုက်မှုရှိ၍ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ကြောင့် ကျေနပ်အားရမှုရှိပါသည် သပ်ရပ်မှု အပြည့်အဝရှိပါသည် ။ ။ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများမှာလည်း ကောင်းမွန်ပြည့်စုံလှပါသည်။ သန့်ရှင်းမှု၊ သပ်ရပ်မှု အပြည့်အဝရှိပါသည်။
ဆေးရုံစဖွင့်ကတည်းက ကျောက်ကပ်ဆေးတာ ဆရာဝန်ပြတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သတိထားမိတာ အလွန်သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ပါတယ်။ HD ဌာနကဆိုရင် ယနေ့အချိန်ထိ မိသားစုသဖွယ်ပါဘဲ။ အပြစ်ပြောစရာကိုမရှိပါ။ကျနော်တို့လို နာတာရှည်ဝေဒနာသည်တွေအတွက် အဓိက က လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ဝန်ထမ်းတွေ၏ ကျွမ်းကျင်မှုပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အတွက်အာယုကပြည့်စုံတဲ့ကုသမှုကိုရရှိခဲ့တယ် ။ ကျောက်ကပ်လူနာအများစုကထူထူထောင်ထောင်နှင့် မိသားစုလိုစကြနောက်ကြတဲ့အထိကျေနပ်စရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအာယုမှာဆေးစစ် ခြင်း ဆေးကုခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အားလုံးက အဆင်ပြေတယ် ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ကြောင့် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် လူသားတိုင်းအာယုသုခပြည့်စုံကြပါစေ ။
ကျွန်မရဲ့သားဦးကိုယ်ဝန် (၃) မွှာပူးသမီးလေးများကို .. အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စွာ မွေးဖွားပေးခဲ့ကြသော OG Dr. Daw Ohnmar နှင့် ဆရာဝန်များ ICU ၊ သူနာပြု ၊ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မှ ဆရာဝန်မျာနှင့်တကွ သူနာပြုများအားလုံး စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကိုလည်း . အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။ Ar Yu International Hospital မှအဆင့်မီစက်များဖြင့် စစ်ဆေးပေးခြင်းကြောင့် တိကျမှန်ကန်သည့် result များရရှိပါသည် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါသည်။ ။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သောဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါသည်။
Ma Hsu Myat Nandar Win
ကျွန်မလူနာမှတ်ပုံတင်နံပါတ်အမှတ် 52843, Hsu Myat Nandar Win ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် (၁ဝ)ပတ်မှစ၍ဆရာမဒေါ်ဥမ္မာနှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆေးခန်းပြစဉ်ကာလအတွင်းမှာ Ar Yuမှဝန်ဆောင်မှု၊ ဂရုစိုက် မှုများမှာ အင်မတန်စိတ်ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ် သည် ။ ။ဆရာမဒေါ်ဥမ္မာ နှင့် ပြသခွင့်ရခဲ့သည်မှာလဲ အင်မတန်စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါ
သားဦးကိုယ်ဝန်မို့ အရာရာစိတ်ပူတတ်သော ဆီးချိုကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို OG Team, Nursery Team, Department တစ်ခုချင်းစီက ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ ကလေးကိုယ်ဝန် နှင့် ပေါင် ၆၀ တက်ခဲ့တဲ့ မေမေကို ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းမှာ အခက်အခဲမရှိလွယ်ကူစွာ ၊ မနာမကျင် မွေးဖွားသန့်စင်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ရတဲ့ဆရာမ ဒေါ်ဥမ္မာ၊ ကလေးဆရာဝန်မကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ခြုံ ၊ မေ့ဆေးဆရာဝန်မကြီး ဆရာမဒေါ်စန်းစန်းမြင့်တို့အား ရိုသေလေးစားစွာကန်တော့၍ကျေးဇူးထပ်တလဲလဲတင်ရှိပါတယ်။ ခွဲခန်းအထွက် တရက်သာအိပ်ယာပေါ်လှဲနေရပြီး ဒုတိယရက်မှ စတင်၍ သာမာန်လူအတိုင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့အောင် ဂရုစိုက် ပေးခဲ့တဲ့ သူနာပြုဆရာမများနှင့် Nursery Team မှ သမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သူနာပြုဆရာမများ အင်မတန်ဂရုစိုက်ကြင်နာပေးတတ်သော Ar Yu ဝန်ဆောင်မှုကို အံ့မခန်း ဖြစ်ရပါတယ် ။ ၁၁ပေါင် ၁ အောင်စရှိတဲ့ Ar Yu Big Baby လေးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။ အစစအရာရာအဖက်ဖက် အားလုံးအတွက်5Stars ပါပဲရှင်။
Ko Phoe Nyan + Ma Hsu Myat Nandar Win Isabella Nyan@Izzy (28.4.2021 to 3.5.2021)
No. 400, Kyaik Ka San Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
(01) 9376 200
(09) 7678 111 22 | (09) 7678 111 33 | (09) 7678 111 44
Copyright © ARYU Hospital 2021. All Rights Reserved